Izibuyekezo Ezintsha Zixhunyaniswa Ngokusesidlangalaleni Kuphrofayeli Yakho Ye-Google +. Igama Lakho Kuzibuyekezo Ezindlule Manje Selivela "umsebenzisi We-Google" - ApkZip.com
upheqa, useshe futhi uthenge izigidi zemikhiqizo ngqo kusuka kudivayisi yakho ye-Android.
Ukulanda (45.90 MB)
4.3 (85.6%) 1,083,014 Amavoti
* Amakhasimende akwazi ukuthenga izigidi zemikhiqizo kunoma yimaphi amasayithi e-Amazon emhlabeni jikelele kusuka kuhlelo lokusebenza olulodwa
* Sebenzisa i-Alexa ukuze ikusize uthenge-sebenzisa nje izwi lakho ukucinga imikhiqizo e-Amazon, ukulandelela imiyalo yakho, uphinde ulungise izinto zakho ozithandayo. Thepha isithonjana se-microphone bese uthi "iziphi izinto zami?" Ukufinyelela kuma-oda avulekile. Hlela kabusha imikhiqizo ngokuthi "lungisa kabusha amathuluzi wephepha" noma "uthenge amabhethri amaningi".
* Sebenzisa ngokuhlelwa kokuchofoza oku-1, ukusekelwa kwamakhasimende, ukufisa uhlu, ukudala noma ukuthola umthamo womntwana noma umshado, ukulandela ukulandelana, nokuningi
* Skena amabhakhodi wamkhiqizo nemifanekiso ukuqhathanisa amanani bese uhlola ukutholakala usebenzisa iSkripthi
* Hlola Iziphesheli ze-Gold Box - kufaka phakathi Ukukhishwa Kwosuku nosuku lokukhanyisa, futhi uthola ngokuzenzakalelayo uma amadili amasha atholakalayo
* Thumela bese wabelana ngezixhumanisi kumikhiqizo nge-imeyili, i-SMS, i-Facebook, i-Twitter, nokuningi
* Bhalisela izaziso zokuthutha ngokuzenzekelayo ukwazi ukuthi i-oda lakho lihamba nini futhi lifika
* Thenga ngokuzethemba, wazi ukuthi konke ukuthengiselana kusetshenzwe ngokuphepha
Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon Shopping luvumela ukuthi uthenge izigidi zemikhiqizo futhi uphathe ama-oda wakho we-Amazon kusuka noma yikuphi. Dlulisa amehlo, thola ngomnyango, qhathanisa amanani, ufunde izibuyekezo, imikhiqizo yabelana nabangani, futhi hlola isimo se-oda lakho.
Qhathanisa amanani nokutholakala ngokuthayipha ekusesha kwakho, ukuskena ibhakhodi noma isithombe ngekhamera yakho, noma usebenzisa izwi lakho. Ungalokothi uphuthelwe ukubhekana nokufinyelela okulula kwama-Lightning Deals kanye ne-Deal of the Day. Ungase futhi ubhalisele izaziso zokuthumela ukuze wazi ukuthi i-oda lakho lihamba nini futhi lifika. Unokufinyelela okugcwele ku-Inqola Yakho Yokuthenga, Wish List, ukukhokha kanye ne-Prime yokukhethwa kukho, Bhalisa & Gcina umlando wokulandelana, kanye nezilungiselelo zokuchofoza oku-1, njenge-Amazon.com ephelele. Ukuthenga kwakho konke okuthengwayo kwe-Amazon kuhanjiswe kumaseva aphephile e-Amazon ukubethela nokuvikela ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Inothi elibalulekile ngokuphathelene nezimvume
Sicela uqaphele ukuthi uhlelo lokusebenza lokuthenga i-Amazon ludinga ukufinyelela kumasevisi alandelayo ukuze asebenze kahle:
* Othintana nabo: Ikuvumela ukuthi uthumele amakhadi wesipho ama-Amazon kubathintana nabo noma isimemo sokufaka uhlelo lokusebenza lwe-Amazon.
* Ikhamela: Ivumela uhlelo lokusebenza lwe-Amazon ukuthi lufinyelele ikhamera yakho kudivayisi. Ungasebenzisa ikhamera yakho ukuthola imikhiqizo ngokuskena ikhava noma ibhakhodi yayo, ukwengeza amakhadi wesipho namakhadi esikweletu, noma ukwengeza izithombe ekubuyekezweni komkhiqizo.
* I-Flashlight: Ivumela uhlelo lokusebenza lwe-Amazon ukuthi luvule i-flashlight. Ungasebenzisa i-flashlight ukuthola imikhiqizo ngesici sekhamera ngisho nasezimo eziphansi noma ezimnyama.
* Imakrofoni: Ivumela insiza ye-Amazon ukuthi ifinyelele imakrofoni yakho ukusebenzisa izwi lakho ukucinga nokuxhumana noMsizi wakho.
* Indawo: Ivumela insiza ye-Amazon ukuthi ifinyelele indawo yakho ukukusiza ukuthola izinhlinzeko zendawo bese ukhetha amakheli ngokushesha.
* I-Akhawunti: Ikuvumela ukuba wabelane ngemikhiqizo e-Amazon nabangani bakho nemindeni nge-Facebook noma eminye amanethiwekhi omphakathi.
* Ifoni: Ivumela uhlelo lokusebenza lwe-Amazon ukuthi luqale ukufaka inombolo yeNsizakalo Yasevisi ye-Amazon ekhiphedi yefoni yakho.
* Isitoreji: Ivumela uhlelo lokusebenza lwe-Amazon ukugcina okuthandayo ukuze ezinye izici zilayishe futhi zigijime ngokushesha kudivayisi.
* I-Wi-Fi: Lezi zimvume zisetshenziselwa ukusetha noma i-Dash Button noma i-Dash Wand usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Amazon Shopping.
Izidingo ze-OS: Kudinga i-Android OS 4.4 noma ngaphezulu futhi ikhamera ebhekene naso. Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon lwethebulethi luyatholakala ku-Google Play. Sesha "i-Amazon Tablet" ukufaka uhlelo lokusebenza bese uqala ukuthenga.
Quick and simple! Scan barcode and view product on Amazon Shopping in seconds.
ufisa - ezitolo zenziwe kumnandi
ukuthatha i-takealot - i-sa's # 1 insiza yokuthenga yeselula yeselula
gumtree izikhangiso zendawo - thenga futhi uthengise
yezitolo online - fashion - zando
uhlelo lokusebenza lwe-mrp
Mobile Realtor. Minsk.